Siyaasadda oo maanta noqotay shayga ugu hadal haynta badan ee gudaha Somaliland, ayaan kala lahayn dad u khibrad iyo takhasus gaar ah u leh iyo mid kaleba, halka kuwii khibrada iyo tacliinta u lahaa ee muddada badan waxbarashada iyo dedaalka ku bixiyey aanay si firfircoon uga qayb qaadan siyaasadda iyo arimaheeda.
Tanina waxay bulshadii ka dhigtay in ay indhahoodu eegaan oo keliya xisbiyadda iyo kuraasta loo tartamaayo, isla markaana ka hadlaan oo inta badan wakhtigooda geliyaan arintaas. Waddamada horumarka ka gaadhey dhinac kasta oo arimaha bulshada khuseeya intooda badan ma tix geliyaan dareen iyo muhiimadna ma siiyaan siyaasada iyo ololaha doorashooyinka midna. Tusaale “ Afar meelood marka loo qaybiyo bulshadda bulshada ku dhaqan dalka Maraykanku aqoon umalaha xisbiyadda ka jira dalkooda, isla markaana kama qayb qaataan olole iyo doorasho midna, sidoo kale in badan oo kamid ahiba aqoon umalaha madaxweynaha u taliya, halka qaar badanina ku baraarugaan uun xilyada madaxweynayaashu isbedelayaan”. Laakiin ayaandarida maanta haysta Bulshadeena ayaa ka dhigtay in fikiradoodii iyo maskaxdoodii oo dhami noqoto siyaasada, taas oo waxa ugu weyn ee ugu wacanina tahay Xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee ku dhisan reeraha iyo qabiiladda.
Siyaasiyiinta caalamku waxay leeyihiin qodobo iyo xeerar xadida hab siyaasadeedkooda waana kuwo ay kudhaqmaan, siyaasigii meel mara ama ka talaabsada xeerarkaasina waxaa la mariyaa hab ciqaabeedka u yaal siyaasiyiinta caalamka, isla markaana waxa lugu tilmaama in uu jebiyey xeer ama qodob.
Qeexitaanadda kala duwan ee siyaasada ayaa dal kasta oo caalamka ku yaal midba si u isticmaalaa, laakiin waa mid hal u jeedo oo keliya leh taas oo ah “Maamulid bulsho iyadda oo lugu jihaynaayo ama lugu jeedinaayo hormarka dalka”, waana mida keliya ee lugu dejiyo xeerarka iyo qawaaniinta ama qodobada lugu kala hago bulsho ama dad meel ku dhaqan, iyadoo la amraayo qodobo halka laga xadidaayo ama laga reebaayo ku dhaqanka qodobo kale oo aan horumar lugu gaadhahayn.
Previous: Wasiirka Maaliyadda Oo Ka Farxisay Mujaahidiin Ka Qayb-galay Xuska 33 Guurada Shuhaadada SNM
Next: Muqdisho: Muuqaalka Guud Ee Goobta Qaraxu Ka Dhacay